हामीले भन्नु पर्छ, हामी अनलाइन लेटर स्लट्समा खेल्न मन पराउँदछौँ। मोबाइलमा, ग्राफिक्सले उनीहरूलाई थोडा तीव्रता र किनाराको कमी राख्दछ, जसले उनीहरूलाई घृणित बनाउँछ - उनीहरूको अनलाइन स्लट भए तापनि ताजा र नयाँ हेर्नुहोस्।
हामी यो उल्लेख गर्दछौं किनभने यो यससँग पनि स्पष्ट छ प्यास फैक्टरी स्लॉट, जुन यो उज्ज्वल र सुन्दर सम्बन्ध हो, सामान्यतया, तर आईप्याड र एन्ड्रोइड ट्याब्लेटहरूमा सानो ड्रब लगाउँदछ। एकदम छोटो मोबाइल फोनमा, दिए।
तैपनि, त्यहाँ कुनै इन्कार नगरी यो अजीब सानो जादूगरियन खान र रंगीन बोतलोंको साथमा पुरानो मा ताजा तालिम प्रदान गर्दछ। जादू स्लटहरू.
तर तपाईं कम से कम शर्त गर्न तयार हुनुहुन्छ 0.80 एक स्पिन?
पशन फैक्ट्री स्लॉट खेल एक धेरै उच्च भिन्नता मिसिन हो। अर्थ, यदि तपाईं सावधान हुनुहुन्न भने, तपाईंको पैसा चाँडै बेस गेममा सनक लगाउन सक्दछ किनकि तपाइँ कठोर बोनस सुविधाहरूको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ।
उनले भने, यो 'नज' को विशेषताले छोटो मद्दत गर्यो, जुन यो2र4घेराले 1 बाट3खाली ठाउँहरूमा सम्भव भएमा विजेता संयोजनहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
यो उत्कृष्ट रमाइलो छ, बेस गेम जीवंत छ, र विस्तारित जंगलीहरूसँग, निश्चित रूपमा तपाइँले लामो समयसम्म प्ले गर्न दिन्छ।
तर, यो मौलिक रूपमा तपाइँको शर्त दुई पटक खर्च गर्दछ। त्यसैले पहिले नै सुन्दर उच्च 0.40 एउटा शर्त, 0.80 मा परिणत गर्दछ - जुन तपाईं भन्दा बढी प्ले गर्न चाहानुहुन्छ।
यद्यपि ठीक छ भने, यदि तपाईले सबै किलेन्डरलाई प्रस्ताव गर्न चाहानुहुन्छ भने, हामी सिफारिस गर्दछौं कि सट्टा तपाई ड्रैगन स्लटमा प्ले गर्नुहोस्।
2 प्यास फैक्ट्री स्लॉटमा बोनस गेमहरू घुमाउँदै
शो को वास्तविक ताराहरू कुनै पनि बोनस सुविधाहरू छैनन्।
एक सरल तर मनोरञ्जनमा म बोनस क्लिक गर्दछु, जुन पोषणहरू पिरोल्न, तपाईंले आफ्नो मिनियन अनौठो आकारहरूमा बदल्नुहुन्छ, जबसम्म त्यो सुपर मिनियन हुन्छ र तपाइँले गुणक जित्नुहुन्छ।
तर नि: शुल्क स्पिनहरू कुनै पनि संदेह छैन जहाँ वास्तविक मजा छ, अर्थात् चिपचिपा जंगली जुन चन्द्रमाको अन्त सम्म रहन्छ, र 100 समयमा हामी एक भन्दा बढी अवसरमा हाम्रो शर्त कहाँ छ।
यो तथ्य हो कि तपाइँ संभावित 'बोनस चक्र' मार्फत बोनस राउन्डको3स्तरहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, र यसले प्रायः हिट गर्दछ, हामीलाई यति ग्राफिक्स र (स्पष्ट) विचित्रता कष्टप्रद आवाजहरू माफ गरीदिन्छ।
पशन फैक्ट्री स्लॉट खेल एक मजा, रंगीन, मामला हो, यदि तपाईको बजेट छ भने, यो ल्याबमा राख्न को लागी जीत र कार्य छ, 40 paylines मा जीत को एक पूरा संयोजन को समकक्ष।
साँचो शरिर मोबाइल
उत्सुक मिसिन मोबाइल
1 ले2गर्न सक्छ
प्यास कारखाना अपडेट गरिएको: जनवरी 31, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 प्यास कारखाना
2.0.0.1 नेमोको यात्रा
2.0.0.2 साँचो शरिर मोबाइल
2.0.0.4 उत्सुक मिसिन मोबाइल
2.0.0.6 बंदर केनो
2.0.0.8 1 ले2गर्न सक्छ